Ukufa kwe-Agency of Record | Martech Zone
Ukufa kwe-Agency of Record
NgoLwesithathu, uDisemba 1, 2010 NgoLwesine, July 2, 2015 Douglas Karr
I-landscape ibukeka kabi kuma-ejensi.
Esontweni eledlule, ngiye kwizingcingo ezingekho ngaphansi kwezingu-5 lapho ithemba ebesivele linomhlinzeki wesevisi, bebekhetha umhlinzeki, noma sebenayo i-ejensi. Saqashwa yinkampani eyodwa ukukhuphula izinga labo lenjini yokusesha. Ngemuva kokubukeza isiza sabo ngaphansi komzuzu, ngibazisa ukuthi kuzoba ngumzamo omkhulu ukunikezwa i-CMS yabo yasendulo. Baxhumane ne-ejensi ebakhele isiza sabo futhi i-ejensi yabanikeza ngokushesha esinye isilinganiso ukuze bathuthukele kwi-CMS entsha. Kungani lelo ejensi lingabazisanga ngaphambili?
Enye inkampani isenze sasebenza ngokuzimisela endaweni yokubhuloga. Inkinga ukuthi imibuzo ababenayo yayingahambisani namandla epulatifomu. Kungani bengazi ngamaphuzu okuthengisa epulatifomu? Kwakuyikholi yokuthengisa ephuthuma lapho iqembu lingazange likhombe ngokwanele izidingo zethemba noma izinsiza zabo.
Senza ukukhuthala okufanele kwenye inkampani ukubuyekeza uhlelo lwe-SaaS abafuna ukuyithenga. Le nkampani isiqashe ngenxa yesipiliyoni sethu esikhaleni se-SaaS kanye nokwazi ngobuningi bezicelo emakethe. Babenamaqembu abo omkhiqizo wangaphakathi nobuchwepheshe - kepha bebefuna i- fresh bheka.
Asibona abasebenzeli bakho abajwayelekile… noma ngicabanga kanjalo. Embikweni Wamuva We-Online Media kusuka ku- eConsultancy, bathole umkhuba kuma-ejensi nokuthi abathengisi bawasebenzisa kanjani. Imiphumela iyamangalisa… futhi ijwayelekile!
Ngeke kusaba khona I-Interactive Agency of Record - Njengoba amafemu e-ejensi ehlanganisa izinsizakusebenza zawo futhi ewisa ama-silos, ngeke sibe khona isidingo sokuthi umakethi akhethe iyunithi yedijithali njenge "ejensi yokurekhoda" yayo. (Lokhu ngaphandle kweqiniso lokuthi umbono we “AOR” ulahlekelwe yincazelo yawo njengoba abathengisi bekhetha ukusabalalisa izabelomali zabo zezikhangiso phakathi kwezitolo ezahlukahlukene.) Njengoba izindonga eziphakathi kwezendabuko nokusebenzisana ziwa, amayunithi edijithali azophoqeleka ukuthi zikhethe phakathi kokuzikhokhela ngaphakathi kohlaka lwe-ejensi enkulu noma ukuphonsela inselelo ama-ejensi wendabuko ngokulawulwa okukhulu kwama-akhawunti wezindaba ngamunye.
Ububanzi bomncintiswano phakathi izitolo zokumaketha ezidijithali izokhula - Ukudonsana kwempi phakathi kokuthengwa kwemidiya yendabuko kanye ne-inthanethi kuzokhonjiswa kuwo wonke umhlaba wokumaketha obanzi. Ngamanye amagama, njengoba amaklayenti efuna indlela "ephelele" yezokumaketha, impi yokuhola umkhankaso ngeke iqhutshwe kuphela ngabesilisa nabesifazane besikhangiso, kodwa ngamafemu e-PR nezindlu zokudala zedijithali kanye nochwepheshe bezokuxhumana nabantu.
Ukuvela kwe Isixhumi Esixhunyiwe - Njengoba lezi zimpi zidlala, isakhiwo esikhulu senkampani ebambe iqhaza sizofuna ukusebenzisa izingxenye zaso ezahlukahlukene ngazwilinye njengakuqala. Vele, isizathu sokuthi izinkampani ezibambe iqhaza zenze imisebenzi eminingi yokumaketha, kusuka kwezobuciko, ukuhlela nokuthenga, ukuya ku-PR kuya kwezokumaketha nezokutshalwa kwezimali bekuwukufaka umthelela omkhulu weGestalt, lapho wonke mkhulu kunesamba sezingxenye zawo. Akunasidingo sokusho, ngaphandle kweminyaka ecishe ibe ngu-30 besebenzela leyo modeli, zimbalwa izinkampani ezibambe iqhaza ezingasho ukuthi zifezekile le nhloso ethile, yize kungenelelekile.
Phuma nesichazamazwi esidala, ungene nesisha - Esikhathini esedlule, amagama afana ne "GRPs," "okuvelayo" kanye "nokuchofoza," asebenze njengezinga lokulinganisa izethameli ngokuqondisa ukusetshenziswa kwemali nokunquma impumelelo yomkhankaso. Ukubaluleka kwalawa magama kuzobe kungabalulekile kangako. Zifanele ukushintshwa yimibono “yenani lempilo yonke,” “umuzwa / ubuhle” kanye “nethonya.” Ngisho nokusetshenziswa "kwezithameli" kulungele isisekelo somlando, ngoba kukhombisa iqembu labantu elingenzi lutho. Esikhathini se-Inthanethi "sokuncika phambili" emithonjeni yezindaba eyodwa nokukhuphuka kwezokuxhumana, igama elinembe kakhulu lokuchaza abathengi umthengisi afuna ukufinyelela kubo kungaba "ababambiqhaza."
Uhlu olucashunwe kufayela le- Online Media Umbiko kusuka eConsultancy.
Lapha Highbridgeukukhula kuye kwaba… ku Isixhumi Esixhunyiwe isikhala. Sibe ngumxhumanisi phakathi kwamaqembu wokumaketha nabahlinzeki bezinsizakalo nemikhiqizo yabo, izimbangi zabo, amakhasimende abo, amathemba abo, abathengisi babo, amafemu abo e-PR nezinhlangano zabo. Yisikhathi esithandekayo kithi futhi esihle ukubona ukuqinisekiswa kwemodeli yebhizinisi lethu kulo mbiko.
Uma uyi-ejensi - yisikhathi sokushintsha amagiya, noma ngabe kungaba nzima kangakanani. Udinga ukusebenza nabanye abathengisi abanamakhono ahlukile… noma ngabe kukhona ukugqagqana kokunikezwayo. Coopetition is in. Uma uyinkampani - sekuyisikhathi sokucabanga kabusha eyakho Isikhungo seRekhodi futhi usebenzise ukuhlukahluka kochwepheshe laphaya abangakusiza ukunqoba izinselelo ze abezindaba ezintsha.
Ayikwazi ukuqhathanisa ne-Will
Mhlawumbe Awumuhle Kulokhu
Aug 16, 2012 ku-11: 36 AM
Okuthunyelwe okuhle! Ukujabulele futhi uvumelana namaphuzu akho abalulekile.
Okthoba 3, 2012 ngo-9: 54 AM
Ukujabulele kakhulu lokhu okuthunyelwe uDouglas. Asiboni lutho ngaphandle kwezinto ezinhle njalo lapho sifinyelela kwenye inkampani.